Qorichi ulfa to'achuuf ganama ganama fudhatamu 'salphaatti argamuu qaba' - BBC News Afaan Oromoo
Qorichi ulfa to'achuuf ganama ganama fudhatamu 'salphaatti argamuu qaba'
4 Muddee 2019
Haadholiiniifi shamarran qorichoota yeroo gabaabaadhaaf ulfa to'atan gargaarsa ogeessaatiin alatti ofii isaaniitiin akka salphatti fayyadamuu danda'uu qabu jedhu ogeeyyiin fayyaa dubartootaa.
UK keessatti dubartoonni tajaajila fayyaa argachuuf bu'aa ba'ii heddutu jira jedha gabaasni dhimma kanarratti dhiyaate.
Fedhii isaaniitiif dursi kennamuu qaba
Gabaasni 'Better for Women' gama isaatiin dubartoonni qoricha jalqabaa ulfa baasu manatti akka fudhatan hayyamamuu qaba jedha.
Qoricha lammaffaas ulfisaanii torbee 10 gad akka ta'e yoo beekan isas manatti fudhatuu qabu jedha.
Isaanis dubartoonni sadarkaa ulfa baasuu jalqabaa bilbilaan yookiin toora 'Skype'tiin gorsa argachuu danda'uu qabu jedhu.
Gabaasni kunis dubartoonni neetworkii kiliinikaa qorannoo dhiigaa, qorichoota karoora maatiifi gorsa itti argatan iddoo tokkotti akka argatan dhibuu isaa qeeqa.
Dhaqna-qabaa akka maleen shamarran 50 hospitaala galan
Yeroo sanitti, haadholiiniifi shamarran qoricha sa'aatii 72 keessatti ulfa baasuuf fayyadu yookiin qoricha ganamaa saal qunnamtii of eggannoo hin qabne taasisaniin booda guyyoota shaniif fudhatamu fudhachuun dura gorsa ogeessa qorichaa argachuu qabu jedha.
Kun ammoo miira "saalfii, qeeqa yookiin gammachuun itti dhagahamuu dhabuu," keessa akka jiraatan godhuu danda'a jedha gabaasni kun.
Qorichoonni ganama guyyoota shaniif fudhatamu kun "fuuldura girgirjii' akkuma kondomiifi meeshaalee ulfa beekuuf fayyadan waliin wal biratti argamuu qabu.
'Qoricha sa'aatii 72 keessatti ulfa ittisuuf fudhatamu argachuuf jedhee qeeqame'
Jeen shamarree ganna 25, yoo taatu Weest Miidlaandis irraa, mana qorichaatti qoricha ganama ganama guyyoota shaniif fudhatamu argachhuf deemtee faarmaasistii waliin beellama waan hin qabneef tajaajila akka hin arganne godhamte.
Mormii hedduu booda ogeessa qorichaa argattee qoricha barbaaddu fudhatte- kun kan ta'e garuu gaaffii hedduu booda.
Akka waan dogongora hojjadhetti natti dhagahame jette.
"Miira namaan qeeqamuufi namaa gad ta'uutu natti dhagahame. Akka inni "kun baay'ee gowwummaadha' jedhe nan yaada jetti Jeen.
Qorichoonni ulfa to'achuuf sa'aatii 72 keessatti fudhataman Iskootlaand fi Weels keessatti mana qorichaa hunda keessatti bilisaan kennamu.
Gabaasni kun akka ibsutti dubartoota umuriin isaanii gara jaarumaa deemaa jiru keessatti sababa ulfa hin karoorfamneen ulfa baasuu dabaluu akka danda'u ibsa.
Bara 2018 keessatti Inglaandiifi Weels keessatti dubartoonni 205,000 ol ulfa baasaniiru.
Gabaasni kunis shamarraniifi haadholiin akkuma bu'aa faarmaasii birootti qorichoota kanneenis karaa intarneetiin ajajuu danda'uu qabu jedha.
Piroofeessar Leesleey Reegaan Pireezidaantii koolleejjii Rooyaali yoo ta'an akkas jedhu, qorichi hormoonii piroojestiroonii qofa qabu baay'ee filatamaa ture saniif qoricha fudhachuun dura gorsi ogeessa fayyaa "barbaachisaa miti".
Gabaasni dabalataanis akka jedhuun gorsa:
karoorri maatii yeroo dheera eega dubartiin deettee booda kan mari'achuun irra jiraatu.
ulfa baasuun dubartoota barbaadan hundaaf jiraachuu qaba.
kiliinikni tajaajila fayyaa hunda kennu jiraachuufi Sanbataafi Dilbata akkasumas galgalas tajaajila kennuu qaba.
marsaan IVF sadiinuu dubartoota fudhachuu danda'an hundaaf UK keessatti kennamuu qaba.
beellamni doktoraa waliin jiru daqiiqa 15 caaluu hin qabu
Gabaasni akka jedhutti ,"dubartoonni hedduu beellama doktora waliin jiru dheerachuurra kan ka'e waggoota hedduuf dhukkubbii keessatti dabarsaa jiru. Kunis akka dubartoonni waa'ee fayyaasaanii akka heddu hin dubbanne taasisa."
Dr Ashaa Kasliwaal, pireezidaantii 'Faculty of Sexual and Reproductive Healthcare' shamarraniifi haadholiin shamarran umrii 18 keessa jiranis tajaajila karoora maatii yeroo gabaabaa akka fedhaniifi yeroo barbaadanitti argachuu qabu jedha. .
"Gorsi faarmasistii waliin godhamu baay'ee barbaachisaafi murteessaadha. Kunis namoonni karoora maatii isaan barbaadan akka fedhiisaaniitti akka argatan gochuuf murteessaadha.
Ta'uus garuu gorsi kun qoricha sa'aatii 72 keessatti fudhatamu argachuuf dhiibbaa qabaachuu hin qabu."
Piroo Reegan akka jedhanitti tajaajila kana kennuuf kan karoorfameefi itti gaafatamummaa fedhii shamarraniifi haadholii fudhachuufi.
"Tajaajila fayyaa sadarkaa isaa eeggatte shamarraniifi haadholiin jireenya isaanii keessatti kennuun barbaachisaadha."
Beeksisi kitaaba qaama saala dubartootaa miidiyaa hawaasummaarraa haqame
Fayyaa dubartootaa: Dubartiin waa'ee qaama saalaa ishee wantoota beekuu qabdu shan